विजनेश :: OnlineKhabar.com - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview
विजनेश फेसबुक बन्यो नम्वर वान एप, यी हुन् सबैभन्दा लोकप्रिय स्मार्टफोन एप
डेढ अर्ब भन्दा बढि प्रयोगकर्ता रहेको फेसबुक दुनियाको सबैभन्दा ठूलो सोसल नेटवर्किंग साइट हो । तर फेसबुकको श्रेष्ठता केवल सोसल साइटको रुपमा मात्र छैन । फेसबुक सबैभन्दा लोकप्रिय स्मार्टफोन एप समेत बन्न सफल भएको...
चन्द्रमामा पुग्ने छैटौँ व्यक्तिको निधन
पृथ्वीको प्राकृतिक उपग्रह चन्द्रमामा पुग्ने विश्वका छैटौँ व्यक्तिको निधन भएको छ । अमेरिकी अन्तरीक्षयात्री एड्गर मिचेलको ८५ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । चन्द्रमामा पुगेको आफ्नो ४५ औँ वर्षगाँठको एक दिनअघि उनको फ्लोरिडास्थित वेस्ट...
पाँच महिनामा सवा चार अर्बको सेयर
२८ माघ, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालू आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्म ४ अर्ब २५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरका सेयर निष्काशनका लागि अनुमति दिएको छ । बोर्डले १ अर्ब ७७ करोड ९८ लाख...
सरकारी हाकिमकाे दाबी: कालोबजारियाले देशलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाए !
२८ माघ, काठमाडौं । मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले तराईबाहेकका क्षेत्रमा भारतीय मुद्राको खपत घटाएको छ । तर, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले अनौठो दाबी गर्दै भनेका छन् कि नाकाबन्दीका बेला तराईमा कालोबजारियाहरुले गरेको व्यापारका...
सडक सुरक्षाका लागि अब सोलारसहितको सीसीटीभी
काठमाण्डौ । शहरका मुख्य सडकमा हुने घटना/दुर्घटनाको निगरानी राख्न र अपराध कम गर्न क्लोज सर्किट टीभी क्यामेरा (सीसीटीभी) राख्न अभियानलाई सरकारले तिब्रता दिएको छ । पछिल्लो समयमा काठमाण्डौ मात्र हैन, नेपालका अन्य मुख्य शहर...
जियोनिको ‘एम फाइभ लाइट फोन’ नेपाल भित्रियो
२७ माघ, काठमाडौं । जियोनिले ठूलो ब्याट्री रहने म्याराथन सिरिजको सबै भन्दा नयाँ फोन ‘एम फाइभ लाइट’ नेपालमा ल्याएको छ । एम फाइभ लाइटमा पूर्ण मेटालिक, अल्ट्रा स्लिम युनिबडीमा ५ इन्चको एचडि स्क्रीन रहेको...
चितवन औद्योगिक प्रदर्शनीमा दर्शकको संख्या बढ्दो
२७ माघ, चितवन । चितवनमा जारी राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीको तेस्रो दिन पनि दर्शकहरुको उत्साहजनक सहभागिता छ । भरतपुरको औद्योगिक प्रदर्शनी मैदानमा जारी प्रदर्शनीमा बुधबार सार्वजनिक विदा परेकाले पनि दर्शकको घुइँचो लागेको थियो । पूर्व...
शिवमले दियो मिस्त्रीलाई तालिम र दुर्घटना बीमाको सुविधा
२७ माघ, काठमाडौं । शिवम् सिमेन्ट प्रालिले मजबुत निर्माणमा गुणस्तरीय सिमेन्टको भुमिका सम्बन्धी सचेतनामुलक कार्यशाला गोष्ठी गरेको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौंको कंलकी र दोस्रो चरणमा भक्तपुरको लोकन्थलीमा कार्यशाला भएका हुन् । भूकम्प प्रतिरोधात्मक...
सामसुङ ग्यालेक्सी ए सेभन र ए फाइभको नयाँ संस्करण आयो
२७, माघ काठमाडौं । स्मार्टफोन उत्पादक सामसुङले बहुप्रतीक्षित ‘ग्यालेक्सी ए सेभन’ र ‘ग्यालेक्सी ए फाइभ’ बजारमा ल्याएको छ । मेटालिक डिजाइन र नयाँ प्रविधिमा आधारित ग्लास भएका यी मोवाईल २०१६ को संस्करण हो । ...
आइएमई पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा
२७ माघ, काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र रेमिट्यान्स कम्पनी आइएमई लिमिटेडबीच अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधान र आइएमई...
दरबारमार्गमा खुल्यो तोयाकाराजको आउटलेट
२७ माघ, काठमाडौं । युवायुवतीहरुमा प्रसिद्ध रहेको ‘प्रणय दिवस’ अर्थात ‘भ्यालेनटाइन डे’को पूर्वसन्ध्यामा तोयाकाराज फ्राइड चिकेनले दरबारमार्गको शेर्पा मलमा आउटलेट सञ्चालनमा ल्याएको छ । ‘कि म्यान’ समूहको शेर्पा मलमा सञ्चालन हुदै आएको क्याफेरिनाबाट तोयाकाराजको...
२७ माघ, काठमाडौं । वीरगञ्ज नाका खुलेपनि ग्यासको आयात बढ्न नसकेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । यसैका कारण सहजरुपमा ग्यास कहिलेदेखि पाइन्छ भन्ने अनिश्चित भएको छ । भारतीय आयल कर्पोरेशन (आइओसी) ले अझै...